बहसः स्थानीय चुनावपछि एनआरएनको मुद्दा के ?  OnlineKhabar
बहसः स्थानीय चुनावपछि एनआरएनको मुद्दा के ?
लगानी नै अबको एकमात्र मुद्दा हुनुपर्छ
एनआरएनहरु आउँछन् र गफ गरेर जान्छन् भन्ने दिनहरु गए । प्रत्येक दुई वर्षमा हुने हाम्रो सम्मेलनमा केही न केही महत्वपूर्ण योजनाहरु घोषणा गर्दै आइरहेका हुन्छौं । अब घोषणा भन्दा पनि कार्यान्वयनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने बेला भएको छ ।
यथार्थतामा विगतमा हामीसँग स्थायी खालको सरकार थिएन । संविधानसभाबाट मुलुकले संविधान पाएको थिएन । १० वर्षे जनयुद्धका कारण अर्थतन्त्र तहस–नहस भइरहेको थियो । लाखौं बिस्थापित थिए । हजारौंले घरबार छोडेर पराधीन हुनुपर्ने बाध्यता थियो । गाउँ तह जनप्रतिनिधिविहीन थिए । अहिले मुलुकमा पहिलो चरण र दोस्रो चरण गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यो हामी विदेशिएका नेपालीहरुका लागि गौरवको विषय हो ।
कतिपयको धारणा छ, एनआरएनसँग पैसा छ, एनआरएनलाई ल्याएर देशमा लगानी गराउनुपर्‍यो । वास्तवमा मुख्य कुरा के भने एनआरएन आफैंमा एउटा सामाजिक संस्था हो । यो संस्थाले लगानी गर्दैन । संस्था एउटा फोरम र माध्यम हो जसद्वारा लगानी गर्ने हो, वर्तमान अध्यक्षले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएकै छ ।
गोरखाको लाप्राकमा विनाशकारी भूकम्पमा परी विस्थापित हुन पुगेका बासिन्दालाई ५ सयभन्दा बढी घरहरु बनाउने महत्वाकांक्षी योजना एनआरएनका वर्तमान अध्यक्ष लगायतले अगाडि सारेको योजना हो । सुरुदेखि नै म यसमा सामेल छु । विगतमा जनप्रतिनिधिविहिन अवस्थामा रहेको त्यस क्षेत्रमा प्रसासनिक झन्झट हामीले बेहोर्नुपरिरहेको थियो । नेपालमा काम गर्न गाह्रो छ । प्रशासनिक काम द्रुतगतिमा हुँदैन । फ्याक्स र इमेललाई मान्यता दिइँदैन, साथै सरकारी कार्यालयमा इमेल र इन्टरनेट चलाउने दक्ष कर्मचारीको अभाव छ । सम्बन्धित मान्छे नै उपस्थिति भएर कागजपत्रमा सही गराउनुपर्ने पुरातनशैलीको प्रसासनिक क्षेत्र छ ।
हामीले यस्ता झञ्झटिला प्रक्रियाहरुलाई बेहोर्दै देशअनुसारको भेष भनेझैं कार्य गर्दै आइरहेका छौं । यसैवीचमा म स्वयं पनि कहिलेकाँही जर्मनबाट मध्यपूर्वका साथीहरुसँगको भेटघाटमा जाँदा लौ न एकपटक लाप्राक त पुगेर आउँ भन्ने लाग्छ, ४/५ घण्टाको फ्लाइट न हो भन्ने फिल हुन्छ । योजना सुरु भएपछि प्रत्येक तीन महिनामा एकदुईपटक म आफैं उपस्थित भएर हेरेको छु भने बेलाबेलामा स्थानीय अधिकारी र हाम्रो आफ्नै च्यानलबाट सोधपुछ गरिरहेको हुन्छौं । यी हाम्रा व्यक्तिगत स्वार्थसँग गाँसिएका विषय होइनन् ।
विगतमा देशभित्र विजुलीको अभावका कारण अन्धकारमय भएको सर्वविदितै छ । देशमा बिजुलीको उत्पादन अति आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेर नै पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेजीले १०० मेगावाटको विजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी परियोजना अगाडि सार्नुभएको हो । सानीमा हाइड्रोपावर परियोजनाबाट सो योजना लागु भएको छ । यसमा देश विदेशमा रहेका नेपालीहरुले लगानी गरेका छन् शेयर प्रमाणपत्रहरु लिएका छन् । लमजुङ्गको रुडीखोलामा २७ मेगावाटको परियोजना सुरु गरिसकेका छौं ।
लगानी गर्दा डराउनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन किनकि गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ ले लगानी सम्बन्धी स्पष्ट पारेको छ । हामीले लगानी गरेका हाम्रा पूँजीहरु लाभांशहरु हामीले लिन पाउँछौं, त्यसको स्पष्ट कानुनी तरिका छ ।
अब सानोसानो पुँजीलाई एकत्रित गरेर लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता हो । नेपालमा जलविद्युतको क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पालाका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले अनलाइन माध्यमबाट जलविद्युतमा शेयर लिनका लागि आहनसमेत गर्नुभएको स्मरण हुन आउँछ । जलविद्युतमा आजै लगानी गरेर आजै प्रतिफल लिने क्षेत्र होइन, यो दीर्घकालीन योजना हो । यसका लागि देशविदेशमा रहेका साथीभाइले विशेष गरी खाडी क्षेत्रका साथीहरुले पनि सोच्नुपर्ने विषय हो ।
महिनाभरि काम गरेर कमाएको पैसा हामी घरमा आइफोन, टीभी लगायत मोजमस्ती र बन्दोबस्तीका सामानमा खर्च गर्दछौं । प्लटिङ्गका जग्गाहरुमा पैसा खन्याएर देशका जग्गा दलालीलाई धनी बनाइरहेका छौं । करिब १० वर्षसम्मको कमाइले एउटा कुनै शहरमा बल्ल घडेरी जोड्न सकिन्छ । अनि त्यहाँ घर बनाउन फेरि १० वर्ष लाग्छ । छोराछोरी र परिवारको साथ कहिल्यै भेट्न नपाउने नेपाली युवाहरुको वाध्यता र विवशता हाम्रो कर्ममा छ । ‘रमाउला साइँली चालीस कटेसी…..’ भन्ने मर्मस्पर्शी पीडामय गीत यसै जन्मिएको होइन ।
जब बुढेसकाल लाग्छ, हातखुट्टा चल्दैन, तब स्वदेश फिर्ता हुन्छौं त्यसका लागि सानो–सानो रकम बचत गरेर जलविद्युतमा लगानी गर्ने अवधारणा आएको हो । त्यो भविष्यमा लिने लाभांश पनि हो । अब २०० मेगावाटको योजना अघि सारेर विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सानोसानो पुँजीलाई एकत्रित गरिने आगामी योजना हुनुपर्नेछ । १०० मेगावाटको निरन्तरतालाई अघि बढाइनेछ ।
नेपालमा पर्यटन, कृषि क्षेत्रमा पनि प्रचुर सम्भावना छन् हामीले सम्भावनाहरुलाई केलाउन सक्नु पर्दछ । देशभित्र अथाह सम्भावना भएको अर्को विषय हो जडीबुटी । विश्व अहिले अर्गानिक खाना एवं अर्गानिक चिजहरुमा आकर्षित छ, हामीले हाम्रा युवा जनशक्तिलाई त्यसतर्फ लक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ, कामको सम्मान गर्ने भावनाको विकास गर्न जरुरी छ । एकता नै बल हो भन्ने कुरा हामी स्वयं विदेशमा बसेकाले बुझिसक्यौं ।
लगानीका हिसाबले पनि विश्वमा नेपाल तुलनात्मकरुपमा सस्तो श्रम बजार भएको देश हो । खुल्ला बजार अर्थनीति भएको हुनाले लगानी गर्न सजिलो छ । लगानी गर्ने चाहिने आधारभूत आवश्यकताको कमी नेपालमा छैन । दुई ठूला छिमेकीहरु विश्व बजारको प्रतिस्पर्धामा छन् । हामी उनीहरुसँग दाँजोमा नगए पनि व्यवसायिक फाइदा लिन सक्नेछौं ।
लगानीका वातावरणहरु अब तय गर्र्ने बेला हो यो । अब देश प्रदेशको चुनावमा जाँदैछ । २० वर्षपछि भएको यो स्थानीय चुनाव भर्खरै सकिएको अवस्था छ । हामी प्रादेशिक सरकारबाट प्रशासनिक कामकाज चलाउनेछौं । केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको अन्त्य हुनेछ । लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण तय भैरहेको यो अवस्थामा देशका लागि सोच्ने बेला आएको छ ।
(लेखक पन्त गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)
२०७४ असार २८ गते ९:२४ मा प्रकाशित
krishna rai लेख्नुहुन्छ | २०७४ असार २८ गते १०:४१
NRN ka mitraharuko soch,superficial dekhin6. Uniharule jab samma Right based Approach bata users ko sahavagitama project selection ra Local stake holders ko direct participent ma priject sanchalan nagari,Netaharu,Banijeya Sangh haru ra kei ucha pad ka Karmachari haruko sahavagita ra gathbandhan ma yojana 6anot huda, yo mahango,dhilo, jhanjhatilo, comission khorihune, ra jana Apnoto ko biparit hun6.Yeslai sacheunus!